Are tourists safe in Puerto Rico after major earthquake? | Airport news
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » လေဆိပ်သတင်း » Puerto Rico တွင်မြေငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးနောက် safe ည့်သည်များလုံခြုံမှုရှိပါသလား။
လေကြောင်းလိုင်း • လေဆိပ်သတင်း • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • Puerto Rico • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းသတင်းများ
Puerto Rico တွင်မြေငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးနောက် safe ည့်သည်များလုံခြုံမှုရှိပါသလား။
ဇန်နဝါရီလ 7, 2020
Puerto Rico ရှိ Sheraton Caguas Real ဟိုတယ်နှင့်ကာစီနိုကိုအသစ်ပြုပြင်သည် eTurboNews ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် guests ည့်သည်များအတွက်အခြေအနေ။
Puerto Rico အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသည်။ အချို့သောအိမ်များနှင့်အဆောက်အအုံများကိုအကြီးအကျယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပျက်စီးမှုရှိသည်။
Puerto Rico သည်အဓိကခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံအချို့အဆောက်အ ဦး များလုံးဝပျက်စီးခြင်းကိုပြသသည်။ ဂွမ်နီကာမှလူများကငလျင်များသည်မာရီယာရီဟာရီကိန်းထက်ပိုဆိုးသည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်။
eTurboNews မရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ Puerto Rico ခရီးသွားလုပ်ငန်း. Puerto Rico ခရီးသွားဝက်ဘ်ဆိုက် အစပိုင်းတွင်ပြိုကျခဲ့ပြီးပြန်ပေါ်လာသည့်အခါငလျင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်မရရှိခဲ့ပါ။
eTurboNews ဂျမေကာရှိ Global Resilience Center ကိုလည်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ စင်တာသည်ကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်း Puerto Rico ရှိမည်သူ့ကိုမျှလက်မခံနိုင်ပါ။
ထိခိုက်သေဆုံးမှုများကိုအစီရင်ခံရန်စတင်နေကြသည်။ ၎င်းသည်တောင်ပိုင်း PR ရှိ Guanica မြို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းတီဗီသတင်းများသည်ငလျင်၏သက်ရောက်မှုကိုမရပ်မနားဖြစ်စေသည်။ ရုပ်ပုံများစွာသည်အချို့သောအဆောက်အအုံများကိုလုံးလုံးဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြသည်။
အဆိုပါ San Juan ရှိ Luis MuñozMarínအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ငလျင်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောမီးစက်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသည်။ Puerto Rico, San Juan သို့အပြန်အလှန်ပျံသန်းမှုများသည်အင်အား ၆.၄ ပြင်းအားရှိငလျင်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့နံနက်ကကျွန်းသို့လှုပ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
လေယာဉ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုမထုတ်ပြန်သော်လည်းဖိနပ် shine နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။
ပြည်သူ့ရေးရာများကိုရှာဖွေသည့် Puerto Rico အစိုးရ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့သွားသောအခါတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်“ စိတ်မကောင်းပါ၊ တစ်ခုခုမှားသွားပြီ” ဟုအမှားတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
Puerto Rico ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်စံချိန်တင် PR နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီလည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
San Juan ရှိ Sheraton Caguas Real Hotel & Casino မှအချက်လေးချက်ကိုပြောခဲ့သည် eTurboNews, ဟိုတယ်အပြည့်အဝလည်ပတ်ခြင်းနှင့်မီးစက်အပေါ်မှီခိုနေသည်။
ခရီးသွား resort ည့်အပန်းဖြေစခန်းအများစုမှာ Puerto Rico ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးမြို့တော် San Juan နှင့်နီးသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာထိခိုက်ပျက်စီးမှုသတင်းများမရှိပါ။
စကားပြောခွင့်မပြုသည့် FEMA ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည် eTurboNews အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိခရီးသွား the ည့်များ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာမရှိပါ။
ဒေသခံတုန့်ပြန်ချက်များအရသိသာထင်ရှားလာသည်။ အချက်အလက်များမှာ Trump သည်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအပြီး Puerto Rico ကိုဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံတရားမ ၀ င်တားဆီးထားသော်လည်းစစ်သုံးကိရိယာများအတွက် ၂ ထရီလီယံအသုံးစရိတ်ပြnoနာမရှိပါ။ ယခုအချိန်တွင်တရားမ ၀ င်သိမ်းဆည်းထားသောငွေများကိုထုတ်ယူရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင်ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၄:၂၄ နာရီ (၆း၄.၄) ပြင်းအား ၆.၄ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ သိသိသာသာပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များစွာအတွင်းပွာတီရီကိုဒေသတွင်ရာပေါင်းများစွာသောငလျင်ငယ်များဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နှောင်းပိုင်းတွင် M7ငလျင်နှင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် M 6.4 အဖြစ်အပျက်များပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ပြင်းအား ၆.၄ ရှိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားသည်။ အဆိုအရ ShakeMap, Puerto Rico ၏တောင်ပိုင်းဒေသများ၌အဖြစ်အပျက်နှင့်အနီးဆုံးတွင်ပြင်းထန်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးတွင်အလယ်အလတ်လှုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ NOAA ဆူနာမီသတိပေးစနစ်မှဆူနာမီသတိပေးခြင်းနှင့်အကြံပေးခြင်းမရှိပါ။ USGS ဒီငလျင်အပေါ်အကျဉ်းချုပ်စာမျက်နှာ ပါဝင်သည် aftershock ခန့်မှန်းချက်။ Aftershocks အဓိကစျေးမှာအနီးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
M 4.7 အဖြစ်အပျက် မှစ၍ ဤဒေသတွင် M 400+ M ငလျင်များလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ၁၀ ခုမှာ M 2+ ဖြစ်ပြီးယနေ့ M4အဖြစ်အပျက်နှင့်မနေ့က ၅.၈ ငလျင်များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ၆.၄ ငလျင်၏ပဏာမတည်နေရာသည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်၊ မေလ ၅.၈ ငလျင်၏ ၇.၅ မိုင် (၁၂ ကီလိုမီတာ) အတွင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များ၏ Puerto Rico နှင့်သူတို့၏ရေတိမ်ပိုင်းနီးကပ်မှုကဤဖြစ်ရပ်များစွာသည်မြေပေါ်တွင်ခံစားခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးငလျင် ၂ ခု၊ M 6.4 နှင့် M 5.8 မှလွဲ၍ မည်သူမျှမဖြစ်ပေါ်စေနိုင် သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
Puerto Rico ၏ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရှိဇန်နဝါရီ ၆ နှင့် ၇၊ ၂၀၊၂၀၊ M ၅.၈ နှင့် M ၆.၄ ငလျင်တို့သည်ရေတိမ်ပိုင်းတွင်တိမ်တိုက်သပိတ်မှောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်၏တည်နေရာတွင်မြောက်အမေရိကပန်းကန်သည်ကာရစ်ဘီယံပန်းကန်နှင့် ပေါင်း၍ ၂၀ မီလီမီတာ / နှစ်နှုန်းဖြင့်အနောက် - အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဦး တည်သည်။ ဖြစ်ရပ်အတွက်အမှားများ၏တည်နေရာနှင့်စတိုင်နှစ်ခုပြားများအကြားပန်းကန်နယ်နိမိတ်အပေါ်ထက်ကာရစ်ဘီယံပြား၏အထက်အပေါ်ယံလွှာအတွင်း intraplate ချက်မှာမဟာ setting ကိုနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Puerto Rico ရှိ Tectonics သည်မြောက်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံပြားများအကြားပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်။ ကျွန်းသည် ၂ ကြားကြားတွင်ညှစ်နေသည်။ Puerto Rico ၏မြောက်ဘက်သို့မြောက်အမေရိကသည်အမေရိကသည် Puerto Rico တုတ်ကျင်းတစ်လျှောက်ကာရစ်ဘီယံပန်းကန်အောက်တွင် subducts ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျွန်း၏တောင်ဘက်နှင့်ယနေ့ငလျင်၏တောင်ဘက်တွင်၊ Muerto Trough ရှိ Puerto Rico အောက်ရှိကာရစ်ဘီယံပြားသည်အပေါ်ယံလွှာအထက်ပိုင်းလွှာ။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်ငလျင်နှင့်အခြားအနီးအနားရှိအဖြစ်အပျက်များသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ Punta Montalva ပြတ်ရွေ့နှင့် Guayanilla Canyon ကမ်းလွန်ကမ်းရိုးတန်းရှိပုံပျက်သောဇုန်တွင်ဖြစ်သည်။